(ဗွီဒီယို) မေးခွန်း ၂ခု | White Boy Learning Burmese
7 thoughts on “(ဗွီဒီယို) မေးခွန်း ၂ခု”
July 20, 2013 at 19:30
You make me think about the linguistics lesson I had when i was in college.
Idea(speaker’s)____ encode_____ Language______decode_______idea(listener’s)
But for the second language speakers
Idea(speaker’s)____encode(into mother tongue)____switch(into Second language)____Language_____Idea (listener)
I am trying to avoid it but i still can’t escape from my mother tongue influence.
စပိန် (သို့) ဂျာမန်လိုပြောတယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လို သိပ်မစဉ်းစားပါဘူး။ ဗမာလိုတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဗမာလိုပဲစဉ်းစားတယ် တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားပြီး ဗမာလိုပြန်တယ်။ မိခင်ဘာသာမဟုတ်တဲ့ လူတွေ အတွက် အခြားဘာသာစကားတွေကိုပြောတာ အမြဲတမ်းခက်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုးကြိုးစားစားလေ့ကျင့်ရင် အောင်နိုင်မယ်။ ကျွန်တော့်ထင်တာကတော့ ဒီဟာ formulaလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် စိတ်ထဲကဘာသာစကားပညာအကြောင်းသိပ်မသိပါဘူး။ စိတ်မဝင်းစားလို့။ 😛
I am from Burma. I live in California. Can speak Burmese and English. Like to help you learning Burmese. Sorry I don’t know how to type Burmese. You are better than me. 🙂
Call the # 209-858-0207 if you want to talk Burmese.
ကျွန်တော့် နံပါတ်ကတော့ ၂၆၀ ၅၁၅ ၁၂၇၅ ပါ 🙂
သူငယ်ချင်းရဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးပါမယ်… မေးခွန်းတွေကိုမဖြေခင် ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်း နည်းနည်းပြောပြပါမယ်… ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်ကနေ ထွက်လာတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ပါ။ ပထမ အာရှမှာ အိမ်နီချင်းနိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ တွေမှာနှစ်အတော်ကြာကြာ နေခဲ့ပါတယ်၊ အခုတော့ ဥရောပမှာ အခြေချနေထိုင်နေပါတယ်၊ ပထမ မေးခွန်းကို ဒီနေရာကနေ အဖြေပေးပါမယ်… မြန်မာပြည်ကနေလာတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ တော်တော် များများ မြန်မာစကားကိုပဲ ပြောဆိုသုံးနှုန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားမှာမွေးတဲ့ ကလေးတွေ ကတော့ မြန်မာစကား ကိုပြောဖို့ တော်တော် ခက်ခဲတယ်
ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ သူတို့ မှာ မိဘတွေနဲ့ အတူနေရတဲ့ အချိန်နည်းပါးပြီး နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းမှာ ကြိးပျင်းခဲ့ရလို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က မြန်မာလို သင်ပေးမဲ့ စာသင်ကျောင်း ဆိုတာမရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ တစ်ချို့မိဘတွေ ကတော့ အိမ်မှာမြန်မာလိုပဲ ကလေးတွေကိုပြောခိုင်းတဲ့အတွက် အနည်းငယ်သော မြန်မာ ကလေးများသာ မြန်မာ စာနဲ့ စကားကို တတ်မြောက်ကြပါတယ်။
ဒုတိယမေးခွန်း အတွက်ကတော့ ဥပမာ အဖြူ တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်တယ် ရလာတဲ့ ကလေးနဲ့ ဘယ်ဘာသာ စကားနဲ့ ပြောမလဲ ဆိုရာမှာ၊
လက်ရှိမိဘ တွေအပေါ်မျာမူတည်ပါတယ်၊ မိဘတွေဘယ် ဘာသာစကားကို အိမ်မှာအသုံးပြုသလဲ ပေါ့ …. မိဘတွေ အသုံးပြုတဲ့ စကားသာ ကလေးတွေ တတ်မြောက်မှာဖြစ်လို့ ပါပဲ…….
myo san oo
နိုင်​ငံခြားသား​တစ်​​ယောက်​အ​နေနဲ့ ဗမာစကားကို အခု​လောက်​​ပြောနိုင်​​တယ်​ဆိုတာ
က အ​ခြေအ​နေ​ကောင်းပါပဲ ဆက်​ပြီ​လေ့လာပါ. .
အကူအညီလိုရင်​လဲ ​ပြောပါ. . . .😊